ओली समुहमा लागेका पुर्व माओवादीहर हिस्स ! – Dullu Khabar
ओली समुहमा लागेका पुर्व माओवादीहर हिस्स !
११ फाल्गुन २०७७, मंगलवार १३:०४
संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन बदर हुने फैसला गरेसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार धरापमा परेको छ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) राजनीतिक रुपमा विभाजित भएसँगै प्रतिनिधिसभामा वर्तमान सरकार अल्पमतमा पर्ने देखिन्छ । प्रतिनिधिसभा बैठक सुचारु हुनासाथ वर्तमान सरकारको वहिर्गमन र नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुने जानकारहरु बताउँछन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटन बदर भएसँगै ओली पक्ष अहिले निराश बनेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि ओलीलाई साथ दिन पुगेका पूर्वमाओवादी नेताहरु पनि सर्वोच्चको निर्णयसँगै रनभुल्लमा परेका छन् ।